Momba anay - Hebei Jinqu Metal Products Co., Ltd.
Barbecue Grill harato harato
Jiro boribory azo alefa
Fantsom-bozaka azo ampiasaina amin'ny kianja azo ampiasaina
Jiro mahitsizoro azo atsipazo azo ampiasaina
Harato grill arina
Japon Barbecue grill harato
Korea Barbecue grill harato
BBQ fivarotana grill harato
Harato grill mora vidy
Jiro mitoby any ivelany
Harato vy manify vy
Hebei Jinqu Metal Products Company Ltd. dia natsangana tamin'ny taona 2005 tany Anping county. Ny orinasa dia mandrakotra faritra 30000m2, misy atrikasa famokarana efatra, trano fitahirizana roa ary atrikasa fanaraha-maso.
Ny injenieranay dia manana traikefa 10 taona mahery ary manaiky OEM sy Customization izahay.
Ny mpanara-maso ny vidiny dia hifehy fatratra ny vidiny ary hiantoka ny mpanjifa rehetra afaka mahazo izay aloanao.
Manam-pahaizana manokana amin'ny famokarana sy fanondranana harato harato izahay. Ny harato grill charcoal dia iray amin'ireo vokatra lehibe eto aminay.
Ary ny bolongana fanaovana barbecue azo ampiasaina dia tena raisina an-tsena eo amin'ny tsenan'i Japon, Korea, Malaysia, Singapore, Aostraliana sns.
Ny famoahana BBQ grill isan'andro dia singa 300,000. Ny kaomandy tsy tapaka any Japon dia kaontenera 12 isam-bolana.
Manana ny fahaizana manome anao ny harato BBQ grill ambony harato miaraka amin'ny vidin'ny orinasa sy ny fandefasana haingana.
Nandany ny volam-pamokarana izahay ary ny famonoana harato dia misy harato vy manify, boribory boribory bbq harato, harato barbecue square, harato grama misy tahony, Grill harato masaka, Japon azo ampiasaina amin'ny tariby famonoana jiro, jiro azo ampiasaina ao Korea.
Ny iraka ataontsika:
Ny tanjonay dia ny manome ny tsara indrindra amin'ny serivisinay amin'ny fanoloran-tena tanteraka sy ny tsy fivadihana nefa mitazona fari-pahaizana ambony avo lenta sy fahombiazana, dia ny manolotra vahaolana arahin'asa vaovao sy mahomby izay manampy antsika hitarika amin'ny fanoloran-tena hihoatra ny vinan'ny mpanjifanay, dia ny hamorona fepetra miasa azo antoka sy azo antoka ho an'ireo mpiasanay manana fotoana faran'izay betsaka hanampiana azy ireo hitombo miaraka amin'ny orinasa.
Matoky izahay fa amin'ny alàlan'ny fanohanan'ny mpiara-miasa sy mpanjifa rehetra ary ny fikirizana sy ny fanoloran-tenan'ny olona anay hatrany, dia hahomby hatrany ny ezaka rehetra ataontsika amin'ny ho avy.
Tazomy sy ampiroborobo ny fiantraikan'ny marika anay eo amin'ny sehatry ny wire wire.
Ny vidiny dia mitovy lanja sy soatoavina manatsara ny serivisy, ataonay mpanjifa toe-javatra mandresy.
Maninona ianao no mifidy anay?
1) Amin'ny fanamboarana harato maherin'ny 15 taona
2) Ekipa mpivarotra matihanina.
3) Serivisy aorian'ny fivarotana tonga lafatra
4) injeniera efa za-draharaha sy mpiasa mahay
5) Marina sy tompon'andraikitra
6) Fanaraha-maso ny vokatra alohan'ny fanaterana.
7) Ny orinasa misy antsika dia eo akaikin'ny seranan-tsambo, mety tsara amin'ny fandefasana izany.
8) Fanamarinana ny fitsapana an'ny ISO9001, SGS ary antoko fahatelo
ADDRESSAtsinanan'i Lin Zhang, Anping County, Hengshui City, Hebei Province, Sina